Inona no atao hoe 'Fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra' amin'ny iPhone? Ity ny Marina! - Iphone
iphone xr tsy vonoina
ny fomba hahazoana scam amin'ny iphone
ny iphone 5c-ko tsy handoa vola
ny bokotra fonenako iphone dia tsy mandeha
Inona ny atao hoe 'fanavaozana ny lozisialy momba ny fitaterana' amin'ny iPhone? Ity ny Marina!
Mandrehitra ny iPhone-nao ianao ary mahita eo no ho eo ny pop-up izay mivaky hoe 'Update Carriers Settings'. OK, misy toerana vaovao - fa inona no dikan'ity hafatra ity, ary tokony hanavao ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona no milaza hoe 'Update Carriers Settings' amin'ny iPhone-nao , inona no fanavaozan'ny toe-javatra fitaterana amin'ny iPhone , ary asehoy anao ny fomba hijerena ireo fanavaozana ny fikirakiran'ny mpitatitra amin'ny ho avy.
Inona no atao hoe 'fanavaozana ny lozisialy'?
Rehefa mahita fampandrenesana milaza ianao hoe “Fanavaozana ny lozisialy fitaterana” ao amin'ny iPhone dia midika izany fa i Apple na ny mpitatitra tsy misy tariby (Verizon, T-Mobile, AT&T, sns.) Dia namoaka fanavaozam-baovao miaraka amin'ny fikirakiran'ny mpitatitra vaovao izay hanatsara ny iPhone fahaizana mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny tamba-jotra.
fiantohana fiara tsy misy fahazoan-dàlana
Ohatra, raha ao amin'ny AT&T ianao dia mety hahita hafatra milaza hoe 'fanavaozana ny mpitatitra AT&T' na 'fanavaozana ny mpitatitra ATT'.
Zava-dehibe ve ny fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra amin'ny iPhone-ko?
Rehefa manavao ny haitao misy azy ny mpampita anao tsy misy tariby dia mila manavao ny iPhone koa ianao raha te hifandray amin'ilay haitao vaovao. Raha tsy tanterahinao ny fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra dia mety tsy ho afaka mifandray amin'ny zava-drehetra atolotray anao ny iPhone-nao. Noho izany, tena zava-dehibe ny hahazoana antoka fa manavao fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra ho an'ny iPhone amin'ny taona 2020 ianao ary hametraka ireo toe-javatra fitaterana vaovao ireo.
Ankoatr'izay, ny fanavaozana ny fikirakirana ny kaontenera ao amin'ny iPhone dia mety hampiditra endrika vaovao toa ny fiantsoana Wi-Fi na fanamafisam-peo-LTE, na fanamboarana bibikely sy glitches izay miteraka olana amin'ny mpampiasa iPhone marobe.
Ahoana no ahalalako raha misy fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra?
Rehefa misy fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra dia mazàna ianao dia hahazo pop-up isan'andro amin'ny iPhone izay milaza hoe: “Fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra: Misy setting vaovao. Te-hanavao azy ireo ve ianao izao? ”
Fa ahoana raha ianareo te-hanamarina fanavaozana ny toe-javatra fitaterana tanana? Tsy misy bokotra 'Check For Carriers Updates' na aiza na aiza ao amin'ny iPhone anao. Misy kosa fomba hafa hanamarinana:
Raha te hijery ny fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra amin'ny iPhone dia sokafy ny Fikirana fampiharana ary kitiho ny General -> About. Raha misy fanavaozana ny fikandrana mpitatitra azo alaina ao amin'ny iPhoneo dia hisy pop-up hiseho eo amin'ny efijery manontany raha te hanavao ianao. Raha mandalo 15-30 segondra ary tsy misy pop-up miseho amin'ny iPhone-nao, midika izany fa mety tsy misy fanavaozana ny fikirakirana vaovao ho an'ny iPhone amin'ny taona 2020.
Ahoana no hanavaozako ny fikirakirana ny mpitatitra amin'ny iPhone?
Raha te hanavao ny toe-javatra fitaterana ao amin'ny iPhone dia tsindrio vaovao farany rehefa miseho eo amin'ny efijery ny fanairana. Tsy toy ny fanavaozana na famerenana hafa, ny iPhone dia tsy hamerina amin'ny laoniny aorian'ny fanavaozana ny toe-pitaterana.
Ahoana ny fomba hijerena raha toa ka miakatra hatramin'ny daty ny fametrahana ny mpitatitra iPhone
Raha tsy azonao antoka na nohavaozina na tsia ny toe-pitaterana dia ataovy izao:
Vonoy ny iPhone anao ary miverena indray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ny solafaka hiala amin'ny herinaratra hita eo amin'ny efijery an'ny iPhone-nao. Avy eo, tsindrio ny sary famantarana ny herinaratra mena avy eo ankavia miankavanana hanakatonana ny iPhone-nao.
Miandry 30 segondra eo ho eo, ary avereno miverina ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra herinaratra mandra-pahatonga ny sary famantarana Apple hiseho mivantana eo afovoan'ny fampisehoana iPhone.
Avy eo, sokafy ny Fikirana fampiharana ary paompy General -> Momba . Raha tsy mipoitra tampoka amin'ny fampandrenesana ny fanairana milaza fa misy fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra azo alaina ao amin'ny iPhoneo, midika izany fa havaozina ny toe-pitaterana anao.
Fikirana mpitatitra: nohavaozina!
Ireo fanamoriana fitaterana anao dia maharaka ary amin'ny manaraka dia ho fantatrao ny dikan'izany rehefa miteny ny iPhone hoe 'Carriers Settings Update'. Tiako ny maheno anao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany, ary aza adino ny manaraka ny Payette Forward amin'ny sehatra media sosialy ho an'ny atiny iPhone tsara indrindra amin'ny Internet!